Khasnajigii Baanka Laascaanood Iyo Hawlwadeen Kale Oo Ku Dhintay Shil Gaadhi | Araweelo News Network (Archive) -
Khasnajigii Baanka Laascaanood Iyo Hawlwadeen Kale Oo Ku Dhintay Shil Gaadhi
Laascaanood(ANN)Alle ha u naxariistee laba qof ayaa maanta ku dhintay shil baabuur oo ka dhacay duleedka tuullada Adhi caddeeye oo qiyaastii 28 Km dhinaca woqooyi galbeed kaga beegan magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool. Ka dib markii gaadhi Surf ah oo baanka
Laascaanood lahaa oo ay wateen kula qalibmay halkaasi.
Sidaana waxa shebekada wararka ee Araweelonews u xaqiijiyay saraakiisha ciidanka wadooyinka ee gobolka Sool. Sida ay sheegeen wararka la xidhiidha shilkaa waxa ku dhintay Qasnajigii Baanka Laascaanood oo la odhan jiray Cabdilaahi Jaamac Faarax iyo darawalkii gaadhigaasi oo la odhan jiray Saleebaan Cabdi Aadan, waxa kale oo ku dhaawacmay laba qof oo kale.
Labada Marxuum waxay saaka ka soo kicitimeen magaalada Burco ee xarunta Gobolka Tog-dheer waxaanay u soo kalahayeen shaqada ay ka hayeen baanka Magaalada laascaanood.
Labada Marxuum waxa maanta lagu aasay magaalada Laascaanood, halka labada qof ee kalena lagu dawaynayo cisbitaalka guud ee magaaladaasi.
Shilal aad u badan ayaa jidka Burco iyo Laascaanood u dhaxeeya ka dhacay labadii bilood ee la soo dhaafay waxaana halkaasi ku dhintay tobaneeyo qof, halka tiro intaasi ka badanina ay ku dhaawacmeen. Shilalka gaadiidka ee dawooyinka Somaliland ayaa aad u baddan, balse ma jiraan baadhitaano rasmi ah oo lagu sameeyo sababaha rasmiga ah ee shilalka gaadiidka.